Laamaha amniga ee maamul goboleedyada Galmudug iyo Puntland oo howlgal wadajir ah fulinaya | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Laamaha amniga ee maamul goboleedyada Galmudug iyo Puntland oo howlgal wadajir ah...
Laamaha amniga ee maamul goboleedyada Galmudug iyo Puntland oo howlgal wadajir ah fulinaya
Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug ayaa waxaa lagu qabtay kulan u dhaxeeyay mas’uuliyiinta Maamulada gobolka Mudug ee Puntland & Galmudug, waxaana looga hadlayay xoojinta dhanka Amniga ee degaannada Gobolka Mudug.
Guddoomiyaha Gobolka Mudug ee Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur ayaa sheegay inay kulanka diirada ku saareen la dagaalanka Al-Shabaab, arrimaha sugida Amniga doorashooyinka, sidii loo xadidi lahaa ka hortegida dagaalada dhex-mara maleeshiyo beeleedyada iyo arrimo kale.
Dhinaca kale Guddoomiyaha Gobolka Mudug ee Maamulka Galmudug Cabdiraxmaan Diiriye ayaa sheegay in labada maamul iyo Ciidamadadooda ay ka mideysan yihiin sugida Amniga degaannada galmudug una diyaarsan yihiin inay ka hortagaan falalka Amni darro.
Waxaa uu hadalkiisa intaasi ku daray in laamaha Amniga Gobolka ay si wadajir ah u fulin doonaan howlgallo amniga lagu sugaayo, isla markaana wada-shaqeyntaas ay tahay mid horumar amni u horseedeysa Shacabka labada Maamul.
Magaalada Gaalkacyo & degaannada kale ee gobolka Mudug ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca qaraxyo iyo dilal ay geystaan Al-Shabaab iyo dagaalo dhex-mara maleeshiyo beeleedyada.